Companieslọ ọrụ Ngwongwo n'ime United States
Blọ ime ụlọ nke oge a bụ ụlọ ahịa nke ụlọ ịsa ahụ na-agbanwegharị ngwaahịa dị na mpaghara Los Angeles. N'ihi na a na-enye ngwaahịa anyị ụlọ ọrụ mmepụta ihe kpọmkwem, ndị ahịa na-echekwa ihe ruru 70% na ihe efu ụlọ ịsa ahụ, pọmpụ, sinks na ndị ọzọ, gbakwunye na-enweta mbufe ọkọlọtọ n'efu na i...
Ebiputara site na Modern Bathroom
nlele Companieslọ ọrụ Ngwongwo Bipụtara 1 year ago
Ngwongwo na-ezo aka n'ihe a na-ebugharị ebugharị ebumnuche iji kwado ọrụ dị iche iche nke mmadụ dị ka oche (dịka, oche, oche, na sofas), iri nri (tebụl), na ihi ụra (dịka, akwa). A na-ejikwa ihe eji eme ka ihe adịghị mma maka ọrụ (dịka mbara ihu dị n'okpuru ala, dị ka tebụl na oche), ma ọ bụ chekwaa ihe (dịka, bọọdụ na shelves). Ngwongwo ulo nwere ike ibu ihe eji eme ya, a na-ahu ya dika udiri ihe eji achọ mma. Na mgbakwunye na ọrụ ọrụ ụlọ, ọ nwere ike ịbụ ihe atụ ma ọ bụ ebumnuche okpukpe. Enwere ike ịme ya site na ọtụtụ ihe, gụnyere metal, plastic, na osisi. Enwere ike ime ụlọ dị iche iche site na iji ọtụtụ nkwonkwo osisi nke na-egosipụta omenala obodo.